အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်၊ မန္တလေး) ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူ
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်၊ မန္တလေး) ပထမနှစ်သင်တန်း လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူလျက်ရှိပါတယ်။
လျှောက်ထားလိုသူတွေဟာ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို မည်သည့်ဘာသာတွဲနဲ့မဆို အောင်မြင်သူ၊ အနုပညာဝါသနာပါသူတွေ ဖြစ်ရပါမယ်။ တက်ရောက်နိုင်တဲ့ အထူးပြုဘာသာရပ်တွေကတော့ ဂီတပညာအထူးပြု ( ၄ ) နှစ် ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့(ဂီတ)၊ သဘင်ပညာအထူးပြု ( ၄ ) နှစ် ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့(သဘင်)၊ ပန်းချီပညာအထူးပြု ( ၄ ) နှစ် ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့(ပန်းချီ)၊ ပန်းပုပညာအထူးပြု ( ၄ ) နှစ် ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့(ပန်းပု)၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇာတ်ပညာအထူးပြု ( ၄ ) နှစ် ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့(ရုပ်ရှင်နှင့်ပြဇာတ်) တွေပါ။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်စာစစ်ဌာနများမှ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ခဲ့သူတွေ အနေနဲ့ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) သို့လည်းကောင်း၊ နေပြည်တော်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်စာစစ်ဌာနများမှ အောင်မြင်ခဲ့သူတွေ အနေနဲ့ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) ကိုလည်းကောင်း လျှောက်ထားတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာတွေကို အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)၊ ၁/ဈ၊အောင်ဇေယျလမ်း၊ (၂၆)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)၊ ရွှေစာရံဘုရားလမ်း၊ အုန်းချောကျေးရွာ၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၌လည်းကောင်း ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာပုံစံနဲ့အတူ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်မြင်ကြောင်းထောက်ခံချက်၊ အမှတ်စာရင်းမူရင်း၊ ပတ်စ်ပို့အရွယ်ဓာတ်ပုံ (၇) ပုံနဲ့အတူ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
လျှောက်ထားလိုသူတွေ အနေနဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက် နောက်ဆုံးထားကာ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) နဲ့ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) သို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်သလို လျှောက်လွှာပုံစံတွေကို သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန www.facebook. com.NUACYangon ကို တိုက်ရိုက်ပေးပို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်မှာ လူတွေ့စစ်ဆေးမှာဖြစ် ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)၊ ဖုန်း- (၀၁-၅၉၀၂၅၂၊ ၀၁-၅၉၀၂၅၄) သို့လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)၊ ဖုန်း – (၀၈၅-၄၀၁၈၄) ကို လည်းကောင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်း နိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသငျနှဈအတှကျ အမြိုးသားယဉျကြေးမှုနှငျ့ အနုပညာတက်ကသိုလျ (ရနျကုနျ၊ မန်တလေး) ပထမနှဈသငျတနျး လြှောကျလှာမြား ချေါယူလကျြရှိပါတယျ။
လြှောကျထားလိုသူတှဟော တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲကို မညျသညျ့ဘာသာတှဲနဲ့မဆို အောငျမွငျသူ၊ အနုပညာဝါသနာပါသူတှေ ဖွဈရပါမယျ။ တကျရောကျနိုငျတဲ့ အထူးပွုဘာသာရပျတှကေတော့ ဂီတပညာအထူးပွု ( ၄ ) နှဈ ၀ိဇ်ဇာဘှဲ့(ဂီတ)၊ သဘငျပညာအထူးပွု ( ၄ ) နှဈ ၀ိဇ်ဇာဘှဲ့(သဘငျ)၊ ပနျးခြီပညာအထူးပွု ( ၄ ) နှဈ ၀ိဇ်ဇာဘှဲ့(ပနျးခြီ)၊ ပနျးပုပညာအထူးပွု ( ၄ ) နှဈ ၀ိဇ်ဇာဘှဲ့(ပနျးပု)၊ ရုပျရှငျနှငျ့ပွဇာတျပညာအထူးပွု ( ၄ ) နှဈ ၀ိဇ်ဇာဘှဲ့(ရုပျရှငျနှငျ့ပွဇာတျ) တှပေါ။
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး၊ ကရငျပွညျနယျ၊ မှနျပွညျနယျနဲ့ ရခိုငျပွညျနယျစာစဈဌာနမြားမှ တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲအောငျမွငျခဲ့သူတှေ အနနေဲ့ အမြိုးသားယဉျကြေးမှုနှငျ့ အနုပညာတက်ကသိုလျ (ရနျကုနျ) သို့လညျးကောငျး၊ နပွေညျတျော၊ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ မကှေးတိုငျးဒသေကွီး၊ စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး၊ ရှမျးပွညျနယျ၊ ကခငျြပွညျနယျ၊ ကယားပွညျနယျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျစာစဈဌာနမြားမှ အောငျမွငျခဲ့သူတှေ အနနေဲ့ အမြိုးသားယဉျကြေးမှုနှငျ့ အနုပညာတက်ကသိုလျ (မန်တလေး) ကိုလညျးကောငျး လြှောကျထားတကျရောကျနိုငျပါတယျ။
လြှောကျလှာတှကေို အမြိုးသားယဉျကြေးမှုနှငျ့ အနုပညာတက်ကသိုလျ (ရနျကုနျ)၊ ၁/စြ၊အောငျဇယေလြမျး၊ (၂၆)ရပျကှကျ၊ ဒဂုံမွို့သဈ (တောငျပိုငျး)၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၌လညျးကောငျး၊ အမြိုးသားယဉျကြေးမှုနှငျ့ အနုပညာတက်ကသိုလျ (မန်တလေး)၊ ရှစောရံဘုရားလမျး၊ အုနျးခြောကြေးရှာ၊ ပုသိမျကွီးမွို့နယျ၊ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၌လညျးကောငျး ၀ယျယူနိုငျပွီး လြှောကျလှာပုံစံနဲ့အတူ တက်ကသိုလျဝငျ စာမေးပှဲ အောငျမွငျကွောငျးထောကျခံခကျြ၊ အမှတျစာရငျးမူရငျး၊ ပတျဈပို့အရှယျဓာတျပုံ (၇) ပုံနဲ့အတူ လြှောကျထားနိုငျပါတယျ။
လြှောကျထားလိုသူတှေ အနနေဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာလ ၁၉ ရကျ နောကျဆုံးထားကာ အမြိုးသားယဉျကြေးမှုနှငျ့ အနုပညာတက်ကသိုလျ (ရနျကုနျ) နဲ့ အမြိုးသားယဉျကြေးမှုနှငျ့ အနုပညာတက်ကသိုလျ (မန်တလေး) သို့ တိုကျရိုကျပေးပို့လြှောကျထားနိုငျသလို လြှောကျလှာပုံစံတှကေို သာသနာရေးနှငျ့ ယဉျကြေးမှုဝနျကွီးဌာန www.facebook. com.NUACYangon ကို တိုကျရိုကျပေးပို့ လြှောကျထားနိုငျပါတယျ။
၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာလ ၂၆ ရကျမှာ လူတှစေ့ဈဆေးမှာဖွဈ ပွီး အသေးစိတျအခကျြအလကျတှကေို အမြိုးသားယဉျကြေးမှုနှငျ့ အနုပညာတက်ကသိုလျ (ရနျကုနျ)၊ ဖုနျး- (၀၁-၅၉၀၂၅၂၊ ၀၁-၅၉၀၂၅၄) သို့လညျးကောငျး၊ အမြိုးသားယဉျကြေးမှုနှငျ့ အနုပညာတက်ကသိုလျ (မန်တလေး)၊ ဖုနျး – (၀၈၅-၄၀၁၈၄) ကို လညျးကောငျး ဆကျသှယျစုံစမျး နိုငျပါတယျ။